नेकपाले भोलि फागुन ८ गते किन गर्दैछ बन्द ? यस्तो छ कारण विज्ञप्तिसहित हेर्नुहोस् — Sanchar Kendra
नेकपाले भोलि फागुन ८ गते किन गर्दैछ बन्द ? यस्तो छ कारण विज्ञप्तिसहित हेर्नुहोस्
काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भोलि फागुन ८ गते लुम्बिनी बन्दको आव्हान गरेका छन् । नेकपा लुम्बिनी ब्युरो इन्चार्ज वीरजंगले गत शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली सरकारको धरपकड, गिरफ्तारी र दमनबिरुद्ध बन्द आव्हान गरिएको बताएका छन् ।
सङ्गठन सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियानमा रहेका आफ्ना नेताकार्यकर्तालाई बिनाकारण गिरफ्तार गरिएको भन्दै उनले फागुन ८ गते लुम्बिनी अन्तर्गत पर्ने जिल्लाहरुमा बन्दको आह्वान गरिएको जानकरी दिए । इन्चार्ज वीरजंगले गिरफ्तार गरिएका आफना नेताकार्यकर्ता रिहा नगरिए रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, गुल्ली पाल्पा, अर्घाखाची बन्दको घोषणा गरेका हुन ।
गत माघ २३ गते अर्घाखाँचीबाट नेकपाका गुल्मी जिल्ला इन्चार्ज पूर्णबहादुर सिंह, सेक्रेटरी खिमबहादर खडका, अर्घाखाती सचिवालय सदस्य पिताम्बर पोखरेल र टुकलाल पुनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुसबैलाई सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सन्धीखर्क अर्घाखाँचीमा राखिएको छ ।
देशभर आफ्नो अभियानलाई तिब्ररुपमा अगाडि बढाइरहेको नेकपामाथि सरकारले बिगतदेखि नै दमन गर्दै आएको छ । नेकपाले भने सरकारी दमनको प्रतिरोध गर्दै आएको छ । यसअघि बुधबार मात्रै नेकपा महासचिव विप्लवले यस्तै चुनाव खारेज अभियानदेखि नै राज्यसँग भयङ्कर ठूलो लडाइँ परेको बताएका छन्।
जबर्जस्ति चुनाव गरेका एघारबाह्र महिनासम्म पनि केपी–प्रचण्डहरूको हात असफलता मात्रै लागेको उनको दावी छ । तर पचिल्लोसमय पछि एकचोटि सत्तापरिवर्तन गर्ने नेतृत्व बिद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने ठोकुवा गर्दै महासचिव विप्लवले जनता पनि आफूहरुलाई साथ तयार रहेको खुलासा गरेका छन् ।
‘जनमुक्ति सेना निर्माण हुदैछ’
महसचिव विप्लवले जनमुक्ति सेना समेत निर्माण भइरहेको खुलासा गरेका छन् । केहिदिन अघि मात्रै एक अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जनमुक्ति सेना निर्माण गर्न लागेको भन्दै भाग लिन र क्रान्तिमा सहभागी बन्न नेपाली युवाहरुलाई आग्रह समेत गएका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जनमुक्ति सेना निर्माण गर्दैछ । यहाँ आएर भाग लिनुप¥यो । अब क्रान्तिमा सहभागी बन्न आउनुप¥यो । अनि केको पीडा ? क्रान्ति त एउटा निरन्तर जीवनको प्रक्रिया हो नि ! जीवन रहुन्जेलसम्म, समाज रहुन्जेलसम्म, साम्यवाद नआउन्जेलसम्म पुँजीवादका विरुद्ध कम्युनिस्टहरूले क्रान्ति छेडिरहनुप¥यो नि । त्यसकारण हामी हिजो थियौँ । दुःख ग¥यौँ । त्यहाँ हामीलाई अलिकति पैसा देऊ । हामीलाई अलिकति सुविधा देऊ भनेर भिक माग्न, रुनकराउन जरुरत नै छैन । पूरा गौरवकासाथ इतिहासमा गरेका योगदानमा गर्व गर्दै नयाँ एउटा इतिहासको निर्माणमा जिम्मेवारी बोधकासाथ जुटौँ। यो हाम्रो कुरा हो ।’